Fampidirana fohy ahitambatra biriky goavambe | Runping
Ny tabilao plastika misy plastika dia antsoina koa hoe Board ofongong, board corrugated, sns. Izy io dia fitaovana vaovao misy lanja maivana (firafitra diso), tsy misy poizina, tsy fandotoana, tsy fahita rano, tsy mahatanty, anti-fahanterana, miorim-bolo ary loko manankarena.
Material: Ny akora fitaovana amin'ny birao goavambe dia PP, antsoina koa hoe polypropylene. Tsy misy poizina sy tsy manimba ny vatan'olombelona.
Fisokajiana: Ny sisan-jaza matevina dia azo zaraina ho sokajy telo: tabataba fanoherana maoderina, birao fihantonan-javatra ary birao fihongonana mahazatra
Toetoetra:Ny tablona plastika tsy misy poizina, tsy misy fofona, tsy mando, hamandoana, miaro ny loto, maivana maivana, tsara tarehy amin'ny endrika, manankarena amin'ny loko, madio. Ary manana ny fananan'ny anti-bending, anti-antitra, fihenjanana-fanoherana, fanoherana tsindry ary ny tanjaky ny ranomaso avo.
fampiharana:Amin'ny tena fiainana, ny takelaka vita amin'ny plastika dia ampiasaina amin'ny sehatra isan-karazany. Nampiasaina tamina indostria isan-karazany toy ny elektronika, fonosana, milina, indostrian'ny jiro, postal, sakafo, fanafody, pestisidaina, kojakoja ao an-tokantrano, fanaovana dokambarotra, haingon-trano, fitaovam-pitaterana, teknolojia optika-magnetika, bioengineering, fanafody ary fahasalamana.